Mpanamboatra sy mpamatsy palitao ivelany qiangwei
1. Ny endrika loko mifanohitra dia raisina hanatsara ny fijerin'ny maso. Ny fiovan'ny loko miloko sy ny loko mifanohitra dia afaka mamoaka fironana lamaody ivelany.
2. Ny palitao dia vita amin'ny lamba manangona rano ravina lotus, izay manangona ny orana ary mihorona ambonin'ny tany, mora ny manohitra ny toetr'andro oram-panala sy oram-panala. Rivotra-porofo, porofon-drano, porofo tsy azo ovaina, mety amin'ny akanjo fanatanjahan-tena any ivelany, teknolojia sarimihetsika miverina miverina ho an'ny lamba hitondra vokany matevina sy mangatsiaka.
3. Zipera tsy tantera-drano amin'ny tampon-tànana sy paosy eo aloha, lakaoly manindry eo am-bavan'ny paosy, mahazaka rivotra ary tantera-drano mahomby. Soritra taratra voatonta eo anilan'ny kitapo zipper dia mahatonga azy io ho azo antoka kokoa ny mandeha amin'ny alina. Velcro dia noraisina tamin'ny cuff mba hanitsiana ny tery mora foana ary hampihena ny fanafihana rivotra mangatsiaka.
5. Azo esorina ny hood, ary ny zipper dia azo afenina ao anaty vozon'akanjo aorian'ny fanesorana azy, miaraka amina asa vita tsara ary na dia soritry ny tsipika aza. Ny tratra dia azo atao pirinty, lamaody, tsotra ary tsara tarehy, ary azo hanaovana fanaovana spaoro fialamboly.
6. Ny tanky dia mandray granulation roa-sisin'ny anti-static, malefaka sy malefaka, tsara ary tsy mandatsaka ny volon'ondry, tsy afaka pilling, fanangonana hafanana haingana, fanidiana hafanana maharitra.
7. Fomba fiakanjo telo amin'ny iray (akanjo tokana palitao + akanjo tokana akanjo lava + akanjo lava sy akanjo mitambatra), famafazana ny fararano sy ny ririnina mankaleo, mora zakaina ny gadona mandeha miova.
8. Ny habetsahan'ny kaomandy farany ambany an'ity vokatra ity dia singa 500, ary ny fomba namboarina, ny loko ary ny fanontana no tohanana. Ny fonosana tsirairay dia fonosina anaty harona plastika mangarahara.
Ity vokatra ity dia mety amin'ny fanatanjahan-tena any an-kalamanjana, an-tendrombohitra, fanaovana ski ambony, fitsangatsanganana amin'ny fananganana vondrona misy orinasa ary fotoana hafa hanaovana azy; Ataovy izany na amin'ny fanatanjahan-tena na amin'ny fialamboly.
Teo aloha: Akanjo tsara fiasana matihanina tena tsara - Fanamiana akanjo - qiangwei
Manaraka: Palitao ivelany
Palitao Ski Down
Palitao Ski tsy tantera-drano